नेपाली नागरिक फागो मुक्त: ‘माओवादी लिङ्क’ के प्रचारबाजी मात्र? – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsनेपाली नागरिक फागो मुक्त: ‘माओवादी लिङ्क’ के प्रचारबाजी मात्र?
August 25, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, मुख्य समाचार, सिलगढी 0
सिलगढ़ी: खोदा पहाड़ निकला चूहा!
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा ‘नेपाली माओवादीको घुसपैठ’ प्रमाणित गर्न लागिपरेको प्रशासन अन्ततः असफल रहेको छ। अगस्त महिनामा भएको सुकना हिंसामा सोझै जड़ित रहेको आरोपमा पक्राउ गरिएको नेपाल फिक्कल निवासी उदय फागोलाई आज सिलगढ़ी आदालतले मुक्त गरिदिएपछि यो भनाइ पुष्ट भएको हो।
सिलगढ़ी मेट्रोपोलिटन पुलिसले गत ८ अगस्तको दिन उदयलाई डन बस्को स्कूल इलाकाबाट समातेको थियो। अगस्त ९ –को दिन उनलाई सिलगढ़ी न्यायालयमा उभ्याइएपछि १२ दिनको रिमाण्डमा पठाइएको थियो।
उनलाई गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनसँग नेपाली माओवादीको तार जोड़िएको हुनसक्ने शङ्कामा पक्राउ गरिएको थियो। मिडिया र जनसभातिर मुख्यमन्त्रीले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई नेपाली माओवादीको ब्याकअप रहेको आरोप पनि कसिन्। पुलिसले पनि उस्तै बयान दिएको हो। फागोबाट केरकारमा उस्तो केही सूचना नपाएकै आधारमा उनलाई छाड़िएको हुनुपर्ने अड़कल काटिँदैछ।
सुकनामा खुकुरी लिएर पहाड़ र तराइका जनता सिलगढ़ीतिर हाँक्किन खोज्दा पुलिसले फाइरिङ समेत गरेको थियो। लसगभग ८ घण्टा चलेको उक्त पुलिस-जनता झड़पमा गाड़ीधुरा निवासी युवक गोली लागेर घाइते बनेका थिए। उही घटनाको सूत्र जोड़्दै आफ्नो परिवारजन लिएर सिलगढ़ीमा पारिवारिक चिकित्सा गराउन भारत पसेका फागो पक्रा परेका हुन्।
फागोलाई हिंसा भड़काउने (आइपीसी १४७, १४८, १४९), पुलिसलाई धारिलो अस्त्रद्वारा हमला गर्ने (आइपीसी १८६, ३२४, ३३९), जनसम्पत्ति भत्काउने (आइपीसी ५०६, ३५३) आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। “हाम्रो दार्जीलिङमा चलिरहेको आन्दोलनसँग कुनै लिनुदिनु छैन। हामी यहाँ उपचार गराउन आएका छौँ,” उदयकी दिदी साधना फागोले उदय पक्रा परेपछि भनेकी थिइन्। आफूहरूसँग उपचार गराउन आएका प्रमाणहरू भएको आधारमा उनको भाइलाई रिहा गरिनु पर्ने दाबी गरेकी थिइन्।
पागोलाई अदालतमा लगिँदा न्यायालय परिसरमै नेपाल-गोर्खाल्याण्ड सम्बन्ध र गोजमुमो विरोधी नाराबाजी गरिएको थियो।
फागोको सूत्रबाट थाहा लागेअनुसार, नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्दा देखाउनु पर्ने तत्परता नदेखाएकोमा फागो परिवार कुण्ठित भएको छ।